Brazilian Tourism Gurukota: COVID Chirango chakaitwa naMwari cheCarnival
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Brazilian Tourism Gurukota: COVID Chirango chakaitwa naMwari cheCarnival
Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • dzidzo • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Investments • LGBTQ • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
COVID-19 haisisiri iyo Chinese Virus, asi yeBrazil Virus Mwari akagadzira kuranga Brazil nekuve neBrazilian Carnival.
Denda repasi rose re COVID rakangozova nyaya yemuno muBrazil apo gurukota rezvekushanya rakapedza hutachiona chirango chinobva Kudenga kupa mhosva zviitiko zvinoratidzwa pamutambo wepasirese wakakurumbira weBrazil
Secretary-General weUNWTO Zurab Pololikashvili akacheka chibvumirano neBrazil kuti adzokere kuBrazil vachimuvhotera achiita gurukota reBrazil mutambi wepasirese wepasi rose uye mutengesi.
Mumwe mutori wenhau weCanada weGlobe akatumira tsamba kuti: Gurukota iri, semunhu wese ari muhurumende iyi, zvinonyadzisa.
COVID chirango chekudenga kupokana nekuratidzira zvinonzi neHurumende Yezvekushanya kuBrazil hunhu hunogumbura pamutambo wakakurumbira weBrazil.
Zviripachena kuti Iye Anokudzwa, iye Hon. Gurukota rezveKushanya Gilson Machado Guimaras Neto, inowanzozivikanwa se Gilson Machado Neto angadai asina kubva pamhedziso iyi pasainzi.
Iye a Brazilian muzvinabhizimusi uye wezvematongerwo enyika, uye zvazvino Mutungamiri ye Tourism yeBrazil pasi pehurumende yaJair Bolsonaro. Akatsiva y Marcelo Álvaro Antônio.
Mukuru uyu akatora chinzvimbo ichi segurukota muna Zvita 2020 mushure megore rinopfuura gore saGeneral Director weBrazil Agency yeInternational Tourism Promotion (Embratur), kwaakashanda mukusimudzira kushanya kweBrazil kunze kwenyika uye, munguva pfupi yapfuura, panguva yedenda. mukusimudzira kwenyika. Asati atora purezidhendi weEmbratur, muna Chivabvu 2019, aive Munyori weNyika weEcotourism ye Ministry of the Environment (MMA).
Brazil ichagamuchira hofisi yekutanga ye World Tourism Sangano (UNWTO) mudunhu reAmerica, sekureva kwemunyori mukuru weboka, Zurab Pololikashvili. "Ndingadai ndakaenda kuUnited States, ndingadai ndakaenda kuCaribbean, ndingadai ndakaenda kuArgentina, asi kwete, [iyo WTO] yakasarudza Brazil nekuti inoziva kugona kwatinako," akadaro. Chikonzero chechokwadi ndechekuti Brazil yakavimbiswa kumisikidzwa neMunyori-Mukuru weUNWTO kuti awane vhoti yake pasarudzo dzichangopera dzeUNWTO, idzo dzakawanda dzakati dzaive dzakabiridzirwa nekunyepedzera.
Nhengo yemubatanidzwa weRota dos Milagres wekushanyirwa uye Maragogi Convention Bureau (AL), Machado Neto akapedza kudzidza mune zvekurapa, asi pakushanya ndipo paakawana basa rake, achishanda mubazi kweanopfuura makore makumi matatu. Pana makumi mashanu nemaviri, Gilson ari zvakare muzvinabhizimusi, mugadziri wechiitiko, uye muimbi.
Iyo Carnival ibhizimusi hombe rekushanya muBrazil, asi gurukota razvino zviri pachena rine imwe nzira.
Heino titter nemufundisi yakatumirwa nhasi:
Gurukota rezvekushanyirwa reBrazil riri kuratidza kuti chirwere checoronavirus chirango chinobva kuna Mwari mushure memutambo weCarnival wakaratidza Jesu waaifunga seanosemesa.
Tichifunga kuti indasitiri yekushanya yekuBrazil inowanzo gadzira sei kubva kuCarnival - izvo zvingave zvichiitika izvozvi - uye parizvino zviri kurasikirwa, ichi chingave chisiri danho rakangwara kubva kugurukota rekushanya.
A tweet nemutori wenhau weCanada anoti: Ndakaverenga nhasi nyaya inosuruvarisa nezvekuparadzwa kwehupfumi muRecife / Olinda pasina mhemberero. Zvakare vhiki yake ini ndichaburitsa chidimbu kuThe Globe and Mail nezve mamiriro ezvinhu muRio. Gurukota iri, semunhu wese ari muhurumende iyi, zvinonyadzisa.